Industrial Paints – General Paints
SUPER Q EPICOX RED OXIDE PRIMER
သံနှင့်သံထည်မဟုတ်သော မျက်နှာပြင်များ ၊ သင်္ဘောများ၊စတီးများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး Epoxy resin အမျိုးအစားကို သုံးထားသဖြင့် ကုပ်အားကောင်းမွန်၍ ခြောက်သွေ့ မှု့ မြန်ဆန်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော အောက်ခံဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ More>>
SUPER Q EPICOX HB WHITE / GREY (E-2001/2009)
သံနှင့် သံထည်မဟုတ်သော မျက်နှာပြင်များ ၊ သဘောင်္များ ၊စတီများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး Special Resin အမျိုးအစားဖြစ်၍ ဆေးစက်ကျခြင်း စီးကျခြင်းမရှိဘဲ မျက်နှာပြင်တွင် နစ်မြုပ်ကုပ်တွယ်ထားနိုင်သော အောက်ခံဆေးအမျိုးအစား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ . More>>
SUPER Q EPICOX ZNP PRIMER
သံနှင့်သံထည်မဟုတ်သော မျက်နှာပြင်များ ၊ သဘောင်္များ ၊ စတီးများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Epoxy Resin အမျိုးအစားကို သုံးထားသဖြင့် ကုတ်အားမြင့်မားခြင်း၊ ပွန်းတိုက်တိုက်စားမှု့ ကို ခုခံကာကွယ်နိုင်ပြီး နေ၊ရေ၊လေ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော အောက်ခံဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။. More>>
SUPER Q EPOXY ZINC RICH PRIMER
သံနှင့် သံထည်မဟုတ်သော မျက်နှာပြင်များ ၊ သဘောင်္များ ၊စတီးများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး သံထည်မျက်နှာပြင်များ သံချေးတက်ခြင်း ၊ ကြွပ်ဆတ်ကွဲအက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် ခြောက်သွေ့ မှု့ မြန်ဆန်ပြီး အသုံးပြုရလွယယ်ကူသော အောက်ခံဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ . More >>
SUPER Q RED LEAD 1K MODIFIED PRIMER 6399
Asathin-film pretreatment primer for machine , equipments , steel building components , chemical industry , construction and steel work surfaces to promote adhesion for subsequent . More >>